Mai Chibwe VekwaZimuto: Chii Chinohi Rudo?
Mubvunzo uyu unobvunzwa nevakawanda chose zvikuru mazuvano, iri ngari yokuti mumhuri dzakawanda vana vava kukura vasingahwisisi kuti rudo chii nokuti ivo Havana kumboona rudo mumhuri dzavo. Ukaterera vanhu vachizama kutsanangura kuti rudo chii, uchahwisisa kuti rudo chinhu chinonetsa kutsanangura. Zvakafanana nokuti ukabvunza munhu agara muHarare kweguva yakareba kuti anokwanisa here kutsanangura kuti Harare chii chacho, anokwanisa kupedza zuva rese achitsanangura asi agosiyana noumwezve agaramo makore amwe chetewo. Kana chinhu chiri chinhu chakakosha serudo, hazvikwanisiki kuchitsanangura zvokuti vese vatereri vasare vasina mibvunzo. Chikuru ndechokungohwisisa kuti Rudo guriko muvanhu zvakangofanana nokuti Harare iriko.
Kuti tisapedza mwedzi wese tichizama kutaura nyaya iyi pano ndongoti RUDO kuhwa fungwa yako nomuviri wako zvichihwa zvakarerekera kukumbana noumwe munhu kuti muve pamwe chete nguva dzese. Kana tichitarisa nyaya yerudo tinoona kuti vanhu kare vakaongorora vakaona kuti rudo chinhu chinoti chero munhu ane njere neasina njere vanoita zvakafanana kana vane rudo. Izvi zvakaitisa kuti vafunge kuti rudo hagusi mufungwa chete. Tikatarisazve mabhuku akanyogwa kare akaita seBhaibheri, tinoona kuti vanyori vaiona kuti rudo gunobata muviri wese nezviito zvako zvese.
Tinoona kuti pane zvaunoshandisa parudo zvinoti
Moyo: Tinohwa vane rudo vachikasira kutaurira wavanoda wacho kuti ari pamoyo pavo nguva dzese. Isu tinoziva hedu kuti mumoyo mune ropa chete asi tozivazve kuti moyo ndichochinhu chinoti ukachikuvadza muridzi anobva afa. Moyo wemunhu uri panoda kuita pakati pemuviri. Kana uchiti unoda munhu nomoyo wese zvinoreva kuti munhu uyu ndiye ari pakati pemuviri wako, nezvese zvinoitwa nomuviri wako zvakarerekera pane zvinodiwa nomunhu waunoda.
Unhu; kuhi uri munhu hunge une rudo gwekupa vamwe vanhu. Mubhaibhiri chinhu chinohi SOUL kuva munhu mupenyu anofema ane muviri unoshanda (LIVING SOUL). Kana wafa hauchisiri munhu ane unhu. Pano hatisi kureva UNHU sokuti munhu uyu ane unhu (This person is well behaved) Tinoreva unhu hwekuti uri munhu. Iko kuva munhu kwako ikoko ndiko kunohi ukushandise kuda vamwe vanhu.
Simba: Vanhu vese vane samba rokuita chimwe chinhu. Zvinohi shandisa samba rako pakuda umwe munhu. Rudo gwako ngaguve nesimba zvinoreva kuti gunoonekwa zviito zvago. Rudo hachisi chinhu chaungaita chigova chakavanda iwe usingachizivi. Kana une rudo gunoita samba pauri rokukukurudzira kuita zvinhu zvawange usingafungiri kuita.
Fungwa: Fungwa dzako dzese dzinozara rudo chete. Unokwanisa kutorota rudo gwako nomunhu waunoda. Unokwanisa kuti uri kumba, kubasa, kochikoro mubhazi, kana pese paunoita nguva isina zvauri kushanda, fungwa yako inozara rudo gwemunhu waunoda. Hapana zvimwe zvakawanda zvaunokwanisa kufunga zvisinei norudo nomunhu waunoda. Unokwanisa kuti uchida mukomana unokwanisa kurota masikati chaiwo zvokuti unokwanisa kugwadziwa moyo nokuti wava nenguva usina kuona mdiwa wako kana kuhwa ihwi rake muzheve yako.
Tichibatanidza zvinhu zvina izvi tinoona kuti ndizvo zvakavaka muviri wako wese kuti uzohi uri munhu. Saka apa zviri kuhi zvese zvinodiwa pakuva norudo.
Kune vanofunga kuti marudzi erudo akasiyana. Kunoti rudo
Gwemukadzi nomurume: gunohi gunofanira kuvapo kusvika vafa. Hagufaniri kuperera pazhira muupenyu hwavo.
Gwemukomana nomusikana: gunoti vanokwanisa kurambana vondonyengana nevamwevo, vovadazve, kusvika vawana wekuroorana naye.
Gwemwana nomubereki: Mwana anoda mubereki wake zvakadzika kusvika azowanawo umwe munhu wekudanana naye obva adanana naye zvakati siyaneyi nezvaaita mubereki.
Gwemubereki kumwana: Haguperi kusvika mubereki afa. Hazvinei kuti mwana aitei, mubereki wake anopopota hake asi anongoda mwana wake. Vabereki vakawanda vanoshaya hope kana mwana ari padambudziko, iri ngari yorudo.
Ini kuona kwangu Rudo gumwe chete zvokuti kana uchida munhu unomuda zvakafanana zvine zvinhu zvina izvo zvatataura kare. Chinongozosiyana pakufambisa rudo gwenyu kuchengeta mitemo youpenyu hwevanhu. Imwe yemitemo iyi inochengetedza upenyu hwedu tese.
Sokuti mutemo wekuti usavata nomwana wako kana mubereki wako. Mutemo uyu mudiki pane RUDO. Unoda mubereki wako chose asi kudanana kwenyu kunotevera mutemo zvkuti haumbofungi kuvata nababa kana mai vako. Rudo guri pamusoro pezvokuvatana.
Poitazve mitemo youpenyu hwako nehama dzako dzakaita sehazvanzi, tete, sekuru, babamunini, babamukuru, mainini, maiguru. Mitemo yese iyi iri pasi peRudo. Unovada hako asi hazvinei nezvimwewo zviitiko zvepamusha.
Kozoti rudo gwemukadzi nomurume. Kudanana kwavo kunoita vade kugara vese upenyu hwavo hwese asi vasiri hama. Pobva paita mitemo yokugarisana kwemukadzi nomurume iri pasi perudo inoti vanovata vese, vanochengeta vana vavo vese, vanogara pamusha wavo vese. Rudo guri pamusoro pezvese izvi.
Rudo gwakaita sokuti ukatora masvosve akawanda womaisa mubhora (football) wosiya pane buri. Masvosve akagara mubhora iri anongochengetedza magarire awo nemitemo yekugara kwemasvosve. Isuwo vanhu tiri kukati merudo tichigara tichichengetedza mitemo youpenyu hwedu. Rudo ndigumwe chete gunoitwa nenhengo ia idzo dzataongorora. Toti Harare rudo, iwe unokwanisa kugara kuHayi Firidzi, kana kuMt Pleasant, kana kuHighlands kana kuMbudzi. Pese pawagara une maonere ako ekuti Harare yakamira sei asi pane umwe ane MAP yese yeharare anoina sezvairi.
Rudo hagusi pachombo chomurume kana chitubu chomukadzi. Rudo handi kuvatana. Rudo handi kukisana kana kubhabhadzirana magaro. Rudo handi kutengerana zvinhu nokufonerana kana kunyorerana tunhu tunonaka kuverenga. Bodo. Zvese izvi munoita nokuti mune rudo kare. Zvese izvi zvinogoneka kuitwa nevasina rudo zvachose.
Murume anokwanisa chose kukupinza chombo agokurhoja zvaunofunga kuti zvinonaka asi asina kana rudo pauri. Apedza anotokuudza kuti chipheka ndikuendese kumba kwako.
Mukadziwo anokwanisa chose kukuvhurira makumbo agokuitira chikapa agodembademba muchipanana zvinonaka, asi adaro agokuudza kuti i ten dollars.
Murume/mukadzi anokwanisa kukutengera zvinhu nokukubhadharira rent asingambokudi
Mukadzi/murume anokwanisa kukufonera nokukurezva pafoni asi rudo asina.
Saka tanga wahwisisa kuti rudo chiiko uye uyu munhu wawada kupa rudo anokwanisawo here kukupa rudo.
Rudo tinodzidza nezvago munhuri dzedu kubva tiri vanana. Kana munhu akakura asingapiwi rudo nevabereki vake zvinomunetsa kuzokwanisa kupa umwe munhu rudo akura. Paya tichitarisa nyaya dzokunyengana tinoona kuti vanhu vakawanda mazuvano vari kutarisa kuti munhu ane mari here. Zvokuti ane rudo here zvava kure.
Tinoonazve kuti mumhuri dzakawanda vabereki vakapera nechakapedza mbudzi vakasiira vanhu vana vekurera. Vana ava vanokura vasina anopa rudo asi zvavo vachidya vachiguta nokupinda chikoro. Iwe kana wonyengana navo chitanga waongorora kuti munyuu uyu anohwisisa zvokuti rudo iCOMMITTMENT yeunhu hwake hwese here kana kuti anongoti ndezvechombo/chitubu.
Ukahwa mukomana/musikana ava kukuudza kuti anokuda, kumbira kuti atsanangure kuti
· Anoziva sei kuti anokuda
· Chii chaanokudira
· Zvakatanga sei kuti akude.
Usamupindura kusvika apedza kukutaurira. Zvadaro chiongorora wea kuti nyaya yake yakarerekera pazvinhu zvina zviye here kana kuti pakuti akakuona nemaziso iota ruchiva gwekuda kuvata newe nokuti une magaro, mazamu, chiso, makumbo akanaka, kana kuti anofunga kuti une mari, mota, mombe, bhizimisi, zvinoonekwa sokuti zvingamusimudzira muupenyu.
Rudo chinhu chakakosha chose mumba. Rudo haisi Phylosophy kana kuti IDEA, kana kuti THEORY.
I love you articles amai. Please may you write about interracial marriages and how they are percieved in Zimbabwe and what one must be prepared to face. Thank you...
Ndichawana nguva ndiinyore. Ine zvakawanda zvinodiwa kufungwa vanhu vasina kuroorana